Fikaroham-bahaolana : mitaky fifampiresahan’ny hery politika ny Vondrona afrikanina (NewsMada) | AEMW
Fikaroham-bahaolana : mitaky fifampiresahan’ny hery politika ny Vondrona afrikanina (NewsMada)
Toy ny fianakaviambe iraisam-pirenena ihany. Anisan’ny navoitran’ny solontenan’ny Vondrona afrikanina eto amintsika, Hawa Ahmed Youssouf, ny tokony hifampidinihan’ny rehetra, manoloana izao olana eto amin’ny firenena izao.
« Ilaina ny fiaraha-midinika sy hitadiavana vahaolana manoloana izao dingana lalovan’ny firenena izao… », hoy izy, omaly tetsy Ankorondrano, tamin’ny fanokafana ny atrikasa ho an’ny mpanao politika. Nohitsiny kosa anefa fa tsy azo ekena ny hanaovana fifidianana mialoha ny fotoana, voizin’ny mpanao politika amin’izao fotoana izao. « Iza no hamatsy vola izany… Hiainga any amin’ny tsy misy indray ny fampandrosoana efa manomboka hita taratra sy ny ezaka ataon’ny fitondrana… », hoy ihany ity solontenan’ny Vondrona afrikanina (UA) eto amintsika ity.
Etsy andaniny, notsindriny ny tokony hanohizana ny fampiharana ny sori-dalana, nosoniavin’ny mpanao politika ny taona 2011, nivoahantsika amin’ny krizy. « Tsy mbola tanteraka amin’ny antisipiriany izany satria tsy mbola nahazo ny onitra tokony ho azony ireo niharam-boina tamin’ny krizy », hoy ny avy amin’ny antoko Teza, anisan’ny mandray anjara amin’ity atrikasa ity. Manana anjara vola tokony harotsany rahateo eo anivon’ilay kitapom-bola ho an’ny firaisankina, hanonerana ireo niharam-boina koa anefa ny iraisam-pirenena, anisany ny Sadc.
Tsiahivina fa tsy mifanalavitra amin’ny nambaran’ny UA ny fanehoan-kevitr’i Chissano, nialoha ny nandaozany an’i Madagasikara, herinandro vitsy lasa izay. Nanteriny fa vao mainka ho sarotra ny raharaha manoloana ireo fitakiana samihafa, toy ny tokony hialan’ny filoham-pirenena sy ireo hetsika fanoherana samihafa. « Mbola handany fotoana betsaka indray ny fikarakarana fifidianana raha mametra-pialana ny filoha ary hiteraka krizy indray izany. Manoloana izany, tokony homena vahana ny fifampiresahana ary tokony hirosoana ny fampihavanam-pirenena. Aleo hialana lavitra ny fifandonana », hoy ihany izy.
Midika izany fa mirona kokoa any amin’ny tokony hifampiresahan’ny hery rehetra ny eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena.
← Hiaraka amin’ny hatsiaka : hitohy ny rivo-mahery hatramin’ny asabotsy (NewsMada)
Ralambomahay Toavina : « Tsy maintsy politika ny lalàn’ny fifandraisana » (NewsMada) →